Lapho Ukuze Bheka Ethakazelisayo womgwaqo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Lapho Ukuze Bheka Ethakazelisayo womgwaqo EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 15/01/2020)
art Street kuyindlela yesimanje yokukhuluma wobuciko elenza amadolobha ethu amahle ngaphezulu. Esihle mural emgwaqweni Ungase usinga ukucabanga ngendaba ebalulekile emphakathini noma kukukhumbuza imisebenzi amakhosi classical.
Emizini Europe zigcwele izindawo ezinhle zichichima yobuciko emgwaqweni kanye graffiti. Ungathatha eside uhamba ezitaladini echichima yasezindongeni futhi ungalokothi uthole nesithukuthezi. Nakhu okunye elithakazelisayo emgwaqweni art nalapho ukusibona Europe:
London ingenye yamadolobha ezikhanga kakhulu kulabo bayakwazisa ubuciko emgwaqweni futhi abaculi ngokwabo. Phakathi ezitaladini ungavakashela ukuze uthole isabelo sakho yobuciko kumnandi, Camden futhi Shoreditch ivelele. Nokho, Brick Lane futhi Southbank kahle aziwayo izindawo, kakhulu. namanje, uma ufuna indawo edume kakhulu, ikhanda ukuze Shoreditch.
Paris ugcwele esiTaladini Nguwe izindawo esishisayo, njengoba ngokuvamile span ezitaladini wonke. Head kuya arrondissements 10 futhi 11 ngokusebenzisa rue Saint-Maur. Kuyinto egcwele Shepard Fairey ekumeni omnyama nomhlophe on ezindongeni zezakhiwo, okwenza kube uhambo enkulu. Lo mgwaqo omude 2km ephambana nge rue Oberkampf, indawo ezithakazelisayo ngombono art emgwaqweni.
Berlin sika East Side Igalari ingenye yezindawo ezihamba phambili emhlabeni kulabo ukujabulela nemidwebo yasedolobheni. Umuzi ngokwawo has a elikhulu emgwaqweni art yesehlakalo, mhlawumbe engcono ekusabeleni Kreuzberg futhi Mitte. Kukhona izifunda ezimbili alleyways kwangaphakathi ebukekayo futhi yisakhiwo sodumo art emgwaqweni izingcezu. Head kuya asempumalanga Kreuzberg wesifunda ukuthola art engcono.
Rome uye waba umgwaqo enamadwala ngokwamukela art emgwaqweni, kodwa leli dolobha elihle manje ekugcineni okuvumela ezisemadolobheni art okudaliwe ukuba baveze imizwa yabo. Kukhona Ezigodini ezimbalwa lapho art emgwaqweni iye kancane kancane ukunqampula up. Nokho, indawo engcono ukuvakashela kungaba San Lorenzo, endaweni kanye amaningi graffiti ukhombise impilo. Uma olivakashelayo eRoma ngifuna ezinye amahle emgwaqweni art, ukugxila Via Enotri, via Ausoni, Via dei Sardi futhi Via dei Sabelli.
Frankfurt yidolobha esithile lingase alindele ukuthola uhlu yobuciko emgwaqweni Umthandi womculo, njengoba unedumela sephawundi ngaphezulu lokuba ibhizinisi muzi. Nokho, omunye ingaphikisana ngokuthi ngisho amadolobha afana ukuthi singangena kule kokuba eqinile art emgwaqweni Inkulumo, ikakhulu ukuvukela ngesikhathi izindleko zokuphila eziphakeme. Frankfurt has a lot of art emgwaqweni emhlabeni esiteshini sesitimela futhi enkabeni yedolobha. I Ehholo Lodumo ku Ratswegkreisel enye indawo ezinhle zokuvakashela.
Amsterdam sika emgwaqweni art yesehlakalo sinamandla ngempela, futhi nemidwebo yasedolobheni sifinyelela ngisho nakulesi sikhathi Museum ziphephile. Izindawo ezingcono Amsterdam yobuciko emgwaqweni kukhona Spuistraat, Wijdesteeg, futhi NDSM, kuhlanganise isikhungo asemadolobheni. Ungase futhi ukuthatha uhambo art emgwaqweni kusukela Amsterdam Central Station. Iqiniso lokuthi lolu hambo ukhona ikutshela olwanele mayelana nendlela uyaziqhenya lo muzi esiTaladini yayo art.
Copenhagen ungumuzi omkhulu uma ufisa ukubona ezinye agqamile zokudala emgwaqweni art - ngisho nasemakhaya abantu! Christiania yilapho uzothola imisebenzi engcono abaculi abanamakhono ezisemadolobheni, ngakho-ke qiniseka hhayi miss it.
Uma usulungele ukubona okuhle kakhulu emgwaqweni art Europe oluyohlala; yonke le mizi kukhona kalula ngesitimela. Bhuka amathikithi akho ngesikhathi futhi ulungiselele ukuba ukwazi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-street-art/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)